धरहरा पुगेर ओलीले भनेः कोदालो बोक्न तयार छु !
- नेपाली सन्देश बुधबार, बैशाख १२, २०७५ , 4.3K जनाले हेर्नुभयो
काठमाण्डु, १२ वैशाख – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पले ढलेको धरहराको पुनर्निर्माणको लागि आफू पनि खटिन तयार भएको बताएका छन् ।
भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा भएको सम्झनामा सुन्धारामा भएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘म मेरो धरहरा बनाउन कोदालो बोक्न तयार छु’, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने, “डोको बोकेर म पनि परे आउँछु तर मै बनाउँछु मेरो धरहरा ।’
उनले समयमा नै धरहरा निर्माण थालिने बताए । ‘थाल्ने हो भने निर्माण कार्य अघि बढ्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘धरहरा छिटो निर्माण गरौं । रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, बसन्तपुर छिटो निर्माण गरौं ।’ उनले अर्को प्रसंगमा नेपालमा फाँसीवाद नभई जनवाद आउने बताए । उनले अलपत्रवाद होइन, सुखीवाद आउने पनि आफ्नो धारणा राखे ।
२०७२ सालमा गएको महाभूकम्पको सम्झनामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा धरहरा, रानीपोखरी लगायतका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण चाँडो हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसो भने–
अब पर्खिने समय छैन हामीसँग । हामीले देशलाई आर्थिक उन्नतकिो दिशामा तीब्रताका साथ लानु छ । भत्केका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको गीतमात्रै बस्ने हो भने बाँकी पुनर्निर्माण कहिले गर्छौं रु समृद्धि कहिले गर्छौं ? त्यसकारण हामीसँग अल्मलिने, पर्खिने समय छैन ।source:kathmandu today